L / R CONVENTIONS-mm – mbc-1813.org
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သူများ ဥက္ကဌ – Rev. စီးလထွန်း , ဒု-ဥက္ကဌ – ဆရာမခင်မာဝင်း
အာခါနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သူများ ဥက္ကဌ Rev. ဘင်ဂျမင် ဒုဥက္ကဌ Rev. အောင်မြင့် အတွင်းရေးမှူးးRev. ယာထူ ဘဏ္ဍာထိန်း ဆရာဒဲလ်နီ ကျမ်းစာကျောင်းအုပ် ဆရာဂျာဖီး တာဝန်ခံများ အမျိုးသားဌာနနှင့်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဌာန Rev.လော်ဒူ (သဘာပတိ – Rev. အာမဲ) အမျိုးသမီးဌာန ဆရာမအယ်နာဂျာဗစ် (သဘာပတိ […]
ဌာနတာဝန်ခံများ လူငယ်လုပ်ငန်းဌာန – ဆရာဆလိုင်းသူရိန်မင်းခိုင် အမျိုးသားလုပ်ငန်းဌာန […]
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်ရှိ သာသနာနယ် နှင့် အသင်းတော်များ
အရှိုချင်းအဖွဲ့ချုပ် တတိယအကြိမ်မြောက် လူငယ်ဓမ္မညီလာခံ
အရှိုချင်းအဖွဲ့ချုပ်၊ လူငယ်ဌာနမှပြုလုပ်သော တတိယအကြိမ်မြောက် လူငယ်ဓမ္မညီလာခံကို ၂၀၁၇-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၆-၁၀)ရက်များတွင် အကျွနု်ပ်ရှိပါ၏
နာဂအဖွဲ့ချုပ် (၂၀၁၆-၂၀၁၉) ဦးဆောင်သူများ
ဥက္ကဌ – Rev. ဦးကျော်နား ဒုဥက္ကဌ […]
လားဟူအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သူများ (၂၀၁၆-၂၀၁၉)
ဥက္ကဌ . Rev. Dr. နာသန်ဖန်း ဒုဥက္ကဌ Rev. ကျာရှော ဒုဥက္ကဌ […]
Rev.ဦးဆိုင်းတစ် နာယက Rev.စောထူးဝါး ဥက္ကဌ Rev.ဦးယောန ဒု-ဥက္ကဌ Rev.အင်တိုးဆိုင်း ဒု-ဥက္ကဌ Rev.စိုင်းသာဟန် GS ဆရာမခင်မာထွေး AGS ဦးအောင်ကျော်ဦး ဘဏ္ဍာထိန်း ဆရာမဒေါ်နန်းဆော့ စာရင်းစစ် Rev.အင်တိုးဆိုင်း ဓမ္မဆရာဌာန ဆရာမမေရီဂိုးလ် ဓမ္မပညာဌာန ဆရာမခင်မာထွေး အမျိုးသမီးဌာန ဆရာစိုင်းမာန်းအောင် လူငယ်ဌာန ဆရာစိုင်းမုရန် အမျိုးသားဌာန […]
နာဂနှစ်ခြင်းဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးမှု အလုပ်ရုံဆွးနွေးပွဲ
နာဂနှစ်ခြင်းဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးမှု အလုပ်ရုံဆွးနွေးပွဲ Naga Baptist Ministers Workshop on Faith & Order ၂၀၁၇-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇-၂၀)ရက်တွင်နာဂနှစ်ခြင်းဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးမှု ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Tangkhul Baptist Association Mission compound တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး […]